Jawaab: Waxaan Akhriyey HAL KA HALEEL?
Guddoomiyaha Ururka Aftahan
Yaasiin Jaamac Nuux (Suldaan)
Qoraaladii Ibraahin Yuusuf Axmed
Ka Eeg Halkan...
Waxaan jeclaystay inaan qoraal kooban ku naqdiyo maqaal dheer oo uu qoray Ibraahim Yuusuf Axmed, oo ku saabsanaa buugga Maxamed Baashe ka qoray Maxamed Ibraahim Warsame “Hadraaawi” ee HAL KA HALEEL oo ka hadlaya taariikhda abwaanka iyo suugaantiisa. Maqaalka oo ciwaankiisu ahaa “Waxaan Soo Akhriyey HAL KA HALEEL” ayuu Ibraahim kaga hadlay waxyaabo badan oo qaarkood ay i qanciyeen kuwana aan doorbiday inaan wax ka idhaahdo oo aanan ka aamusin. Maqaalka oo aad u dheer ma doonayo inaan gebi ahaantiiba wada naqdiyo balse waxaan doonayaa inaan qayb ka mid ah oo aan filaayo inay tahay nuxurka maqaalka inaan is dul taago oo aan wax ka idhaahdo.
Ugu horreyn, maqaalku sidaan hore u soo sheegayba wuu dheer yahay, qaybta ugu horreysaana waa ammaan iyo araar ku aadan buugga iyo qorihiisa. Intaas marka la soo dhaafo waxa loo gudo gelayaa qaybaha ugu muhiimsan qoraalkaas, xooggaa aan idinka xasuusiyo ciwaan hoosaadka qaybaha, ta ugu horreysa waxa weeye “Xulka murtida maansooyinka buugga”, “Dhaliilo aan jirin”, “Dhaliila jira”, “Maagid”, “dheelli maanso” iyo ciwaanka ugu danbeeya oo uu Ibraahim u bixiyey “af soomaaliga”. Haddaba qaybaha aan doonayo inaan wax ka idhaahdo waxa ka mid ah ”Dhaliilo aan jirin, Dhaliilo jira iyo Maagid”
Waxa aan aamminsanahay sida uu Ibraahimba qiray inay innagu cusub tahay dhaqanka, in wax dhaliishiisa la soo tebiyo ha ahaato, mid buug, mid maqaal, siyaasi iyo mid abwaanba. Gebi ahaanna haddii aynu soomaali nahay waxaynu jecel nahay ammaanta iyo in qofka wax wanaagsan laga sheego, ”Ceebteena maahee waa caadadeena”, haddii qofka inyar oo xumaan ah laga sheego, wanaagiisii ciddi isla soo qaadi mayso ee waxa loogu quudh-goynayaa intiisii yarayd ee dhaliisha ahayd, sideedabana bini’aadamku dhaliil kama madhna. Markaa in uu Ibraahim buugga Hal Ka Haleel dhaliilo wax shido ah oo aan ka soo qaadayaa ma jirto, hase ahaatee waxa is weydiin leh dhaliisha lafteedu ma tahay mid la sii dhaliili karo, mase mudan tahay in dhaliisha lafteeda la isla garto inay dhaliil tahay iyo in kale. Waxa Ibraahim ina soo hordhigay mawduuc xasaasi ah oo uu isagu ka eegay dhiniciisa, hase ahaatee aniguna saddexdaas ciwaan-hoosaad ee aan kor ku soo xusay ayaan ka faalloon doonaa siday ila tahay haddii Alle idmo.
 Dhaliil aan jirin:
Ibraahim isku aragti kama nihin kumana raacsani inuu yidhaahdo Maxamed Baashe wuxuu dhaliil aan jirin u yeelayaa qaar ka mid ah suugaanta Hadraawi, waxaanu soo qaadanayaa toddoba qodob oo uu leeyahay wax dhaliil ah ma leh, balse qoraaga ayaa cidla durduriyey oo dhaliil aan jirin dusha ka saaray. Qodobadaasina waxay ka mid yihiin kuwa badan oo uu qoraagu dhaliilay. Waxaanu Ibraahim arrintaas ku adkeeyey haddii lagu raaco Maxamed Baashe (qoraaga buugga) dhaliilahaas, oo ay hirgalaan inay tahay dhabarjab weyn oo loo geystey suugaanta soomaalida. Sideedaba marka aynu suugaan dhaliilayno labo siyood ayeynu midkood dhaliisha raacinaa, midka koowaad waa in dhaliilaashi ku tiirsanaataa dhinaca diinta, mid ka kalena waa inay gef iyo meel ka dhac ku tahay anshaxa iyo asluubta dhaqan iyo suugaaneed ee Soomaalida. Haddaba, aan soo qaado toddobada qodob ee uu Ibraahim dhaliisha u diiday:
1) Heesta “Toddobaatan midabley”:
Heestani waa hees isweydiinteedu in badan soo taxnayd, waxaan daawaday cajalad lagaga duubay Hadraawi horraantii 1990gii waddanka Norway, waxa lagu weydiiyey heestaa ”Toddobaatan Midabley” iyo wakhtigii ay soo baxday, sababihii ku kalliftey inuu tiriyo iyo gabadha uu u tiriyey inay ahayd gabadh uu dhalay Maxamed Siyaad Barre iyo inkale. Waxaanu Hadraawi ku jawaabay ”heestaa anniga ayaa tiriyey, mana jecli inaan sheego ciddii aan u tiriyey, inaan soo hadal qaadana aad baan u necebahay”, waana markii ugu horreysey ee aan ogaado in heestaasi dhaliil ba’an leedahay. Haddaba Ibraahim hadduu aamminsan yahay in ay dabiici tahay in wixii xun la dhaliilo wixii wanaagsanna la ammaano, miyaanay habboonayn in ceebta dadka la asturo, isla markaana miyaanay anshaxa halabuurka meel kaga dhac ku ahayn inuu qof dumar ah suugaan ku aflagaadeeyo isagoon sarbeeb, sogordi, afgobaadsi iyo maldahaad midna isticmaalin. Waana halkaa meesha dhaliishu uma soo hoyatey heesta.
2) Heesta “Guducur aan caddaba jirin”:
badhi lay cabsiiyiyo
cashar muxuu i tarayaa
Labada beyd ee uu soo qaatay Maxamed Baashe waxaan ku raacsanahay inay ka mid yihiin meelaha khaladaadku kaga jiro suugaanta Hadraawi, beydka dambe waxa uu muujinayaa ku kalsooni la’aan ah, in casharku aanu waxba ka tarin jacaylka, taas oo halabuurku ku talax tegayo meel fog uga soo maydhax-diirka jacaylka. Casharkuna waa dawo ka mid ah kuwa ugu muhiimsan ee la isku daweeyo, waxaana daliil u ah in Nebigu (Calayhi salaatu wa salaam) qofka xanuunsanaya marka uu booqdo uu qu’aan ku akhrin jirey, meeshii kastaa ha xanuunaysee. Casharkuna sidiisaba maaha ka aynu isla wada garanayno ee ah (biyo qur’aan lagu akhriyey) oo keliya balse, waxa kale oo cashar ah qu’aanka laftiisa. Halabuurka in jacaylku kaga weynaado casharka waxay noqonaysaa gef iyo meel ka dhac suugaaneed oo ku tiirsan dhinaca rumaynta iimaanka.
3) Heesta “Xamareey ma nabad baa”:
Waxaan aamminsanahay in dhool-dhoolinta jacaylka khalad badan oo dhinaca suugaanta ahi ka yimaado, beydka ku jira heesta ”Xamareey Ma Nabadbaa” ee odhanaya ”Xajkii Geeska bariyeey” waxaan ku tilmaami karaa mid aan dhaliil toosa ahayn balse ku xidhan hadba sida loo fasisho, waayo haddii qofku u fasisho in Xamar ammaanteedii lagu talax tegey oo Xajkii Soomaaliya lagu tilmaamay waa arrin macquul ah, waxayna noqonaysaa khalad diiniyan ah, balse haddii loo fahmo inay ammaan keliya tahay oo tusaale ahaan loogu sheegay Xamar inay tahay Xajkii oo kale balse aanay arrin xaqiiqa ahayn wax dhaliil ah oo ay yeelan kartaa ma jirto, waxaana dhaliil uga dhaw beydadka* caanka ah ee yidhaahda,
Ninkii Xamar tegay,
Xaj uma baahnee,
(* Beydadkan Hadraawi ma laha, ciddii lahaydna ma hubo)
Khatarta Internedka iyo Caruurta
Caruurta Soomaalida Iyo halista Internedka... Guji July 24
4) Heesta “Cajabeey”:
haddaan lay cadaabayn
Rabbi ii cadhoonayn
dadku inuu ku caabudo
sow kuma canaanteen!
Waxa jira xadiis uu Rasuulku (SCW) ku leeyahay ”haddii ciddi cid kale caabudi lahayd, gabadha ayaa ninkeeda caabudi lahayd” Waxa uu isticmaalay kelmedda afeefta ah ee ”Haddii” oo micnaheedu yahay ”ma noqnaysee” waxaan dhici karin. Isagoo markaa Rasuulku (SCW) sii adkaynayey inaan Ilaahay mooyee cid kale la caabudin, haddana inoo muujinayey ahmiyadda xaqa uu ninku gabadhiisa ku leeyahay. Markaa hal-abuurku laba jeer ayuu afeeftay, marka hore wuxuu yidhi ”Haddaan” lay cadaabay oo wuxuu caddeeyey in haddii uu sidaa sameeyo lagu cadaabi doono, marka labaadna wuxuu yidhi ”Rabbi ii cadhoonayn” oo wuxuu tilmaamay haddii uu sidaas sameeyo in Rabbi cadaabta oo keliya aanu kaga tegeyne uu sidoo kale cadho u raacinayo, ”Ilaahay haddii uu kuu cadhoodo naxariistiisa ayuu kaa dheereeyaa”. Inkastoo ay ereyadaasi karaahiyo yihiin haddana wax dhib ah xaggayga kama laha. Waxaase heestan dhaliisha u soo jiiday iyadoo ay ka mid ahayd heesihii laga badbadiyey ammaan ahaan, waxayna shaki weyn gelinaysaa ciddii aan aragti dheer u lahayn macnaha kelmedaha isku tiirsan siday u bedeli karaan nuxurka hadalka ama heesta.
sow ma tihid ilayskii
sideen kaaga oolaa!
Waxaan odhan karaa Ibraahim iyo Maxamed Baasheba waxay ilduufeen beyd aan odhan karo wuxuu xambaarsan yahay dhaliisha heesta,”Saw ma tihid ilayskii”. Beydkaas haddii lagu ladho beydka kale ee ah ”iimaanka lahashada” waxa ka soo dhex baxaya dhaliil aad u weyn. Bal isku qabo labadaa beyd macnaha ay samaynayaan:
Saw ma tihid ilayskiyo
Beydadkan waxaan ku tiriyaa kuwa ugu daran ee meelka dhaca maanseed ah ee Hadraawi curiyey, iyaga iyo kuwo ku jira maansada Daalalley qaybteeda dambe. Ibraahim waxa uu sheegay inay jiraan labo iimaan oo mid yahay ka Ilaahay lagu rumeeyo, midka kalena yahay mid soomaalidu isla wada taqaan oo aan diin shaqo ku lahayn, waxaanse leeyahay Ibraahim iimaanku sida diintu inoo sheegtay waxa uu ka kooban yahay dhawr iyo toddobaatan qaybood, halka ugu sarreysaa waa tawxiidka”Laa Ilaaha Ila Laahu, Maxamaddun Rasuululaah” halka ugu hooseysaana waa, waddada la marayo oo aad qodox ka qaadid. Kan hurguri weynaanta ah ee ay soomaalidu taqaanaana wuxuu ka mid yahay iimaanka diinta.
6) Heesta ”Hooyo”:
ka dul heesayaayoo
Labadaa beyd waxaynu odhan karnaa waxay ka mid yihiin kuwa ugu nuxurka iyo macnaha yar ee ay heesta Hooyo u dhitiso ama ay naaquska ka yeelato. Sida Ibraahim sheegay labadan beyd kama madhna ”Xabaal Caabudid”, balse haddii uu sidaas u fasirayba muxuu ku diiday inuu nuxurkaa weyn ee lagu dhaliilay heesta inuu u aaneeyo ee uu waxa aan jirin ula qooranayaa. Waa arrin weyn in laga digtoonaado, lagana feejignaado ammaanta xad dhaafka ah oo dhibaato keeni karta. Sida Ibraahim ku doodayo ee ah inay ereyadaasi yihiin ”qurxin faneed” la doonayana in dareenka hoose ee qofka loo dhaadhaco, ayaa iila muuqda mid marin habaabin ah uu doonayo Ibraahim dhaliisha ay ereyadaasi leeyihiin inuu ka dhigayo qaar aan wax-ka-soo-qaad lahayn. Haddii aan sii duro heestaa lafteeda waxaan dhaliili lahaa beydadka ugu horreeya ee ah:
Habeen kama baxdeenoo
Iftin lama heleenoo
7) Heesta “Hambaaber”:
sidii hebed geela
hashii Nebi Saalax
hankeedu ma siiyey!
Sida buugga ku qoran waxa qoraagu tixdan ku saluugay hal tuduc oo ah ”sidii hebed geela” kaas oo qoruhu ka maandiiday in hasha Nebi Saalax (CS) lagu tilmaamo inay ahayd hebed. Masaladan oo ay Ibraahim iyo Maxamed Baashe ku kala aragtida duwan yihiin ayaan anigu odhan lahaa, hashuna hebed ma ahayn. Abwaankuna ma odhan karo waa hashii awowgey, sida Ibraahim ku doodayo, maadaama hasha laga hadlayaa ay tahay mid mucayin ah (la yaqaan) hashii Nebi Saalax (CS). Wax dhaliil ah oo weyn uma arko xitaa haddii hasha Nebi Saalax (CS) hebed lagu sheego.
MAANSADII DOOD WANAAG
Marka hore waxa habboon in la isla garto waxa ay Wahaabiyadu (argagixiso) tahay, iyo cidda lagu tilmaami karo inay argagixiso tahay. Cid walba cidda dhibta ama shar ku ah ayaa argagixisadeeda ah. Ummaddaha adduunka oo dhami argagixiso (wahaabiyad) ma wada laha, qolo waliba qolada kale ee dhibta ayey wahaabiyiin u arkaan. Maraykanka iyo Yuhuudda waxay argagixisada u arkaan Islaamka iyo Falastiiniyiinta. Ciraaqiyiinta iyo Falastiiniyiintuna waxay argagixisada u arkaan Maraykanka iyo Israa’iil. Soomaalida waxay argagixisada u aragtaa Ethiopia, halka ay Ethiopia-na argagixisada u aragto Soomaaliya. Qolo waliba waxay ku dedaalaysaa inay qolada kale argagixiso ugu sheegto si caalamka kalena ugu hiiliyo oo markaas ay ka takhalusto.
Haddii aynu sidaas garanay in argagixisadu aanay ahayn wax la isla wada garanayo ama aanay ahayn wax adduunka oo dhan isku raacsan yahay oo qolo waliba ay cidda dhibteeda ah ay argagixiso u taqaan. Ma waxaynu raacaynaa aragtida Ibraahim ee ku aadan sida ay waddamada reer Yurub ku eegaan ama ay argagixisa u yaqaanaan, ee ah qofka asal raaca ah ama dhaqankiisa iyo diintiisa ku adag, sida ba’anna ugu dheggan. Miyeynu ku raacsanahay Ibraahim in ay Soomaalidu argagixiso adduunka ku tahay, marka uu ku leeyahay Hadraawi waxa afka loogu riday hadalkii wahaabiyada kolkii uu Nabaddaynta Soomaaliya ku marayey. Halkee ayuu Ibraahim ku arkay argagixisada Hadraawi la hadlaysay ee afka wax ugu ridaysey? cidda uu argagixisada ku sheegayaa waa tee? Haddii heesaha ”Fisqi” lagu tilmaamo ma argagixiso ayaa lagu noqonayaa? Haddii jawaabtu noqoto ”HAA”, Yaa argagixisada loo noqonayaa? Ma waxaynu ogolaanaa in Hadraawi, Maxamed Baashe iyo Soomaalida oo dhami ay wahaabiyiin yihiin oo waxaynu yeelnaa fikradda Ibraahim?. Haddii aynu taas yeelno yey u noqonayaan wahaabiyiinta, ma Ibraahim? Ma fanka iyo halabuurka? mise Maraykanka? Weli ma wuxuu Ibraahim qabaa fikirkii Maraykanka ee ahayd Soomaaliya waxa jooga argagixiso? Haddii ay joogtose yey argagixisadooda tahay ma Maraykanka mise Soomaalida?
Waxaan hore u soo sheegay in marka wax la dhaliilayo lagu tiiriyo labo arrimood midkood, waata koowaade waa dhaliila lagu tiiriyaa dhanka diinta, oo ay dhaliilaashi noqotaa mid qadaf ku ah diinta. Mida kalena waa inay tahay mid ka soo horjeeda dhaqanka*, hiddaha, afka iyo suugaanta Soomaaliyeed. Ummad walba waxay leedahay dhaliil gaar ah oo ay kala soo dhex baxdo dhaqankeeda iyo wax caadi ah oo dhaqankooda iyo diintooduba u ogol yihiin.
Ereyga “dib u socod” sharxi mayno oo macne cusub u yeeli mayno, waayo dadkoo dhan ayaa fahmaya nuxurkiisa hoose iyo kiise sareba. Hase ahaatee waxa mar marka qaarkood ku yaab gelinaya fikradaha asalkoodu liito ee wax-ma-garata iyo dhegweyntuna aanay fahmayn halka ay ka soo burqanayaan, iyo cidda ka danbaysa toona.
Nolosha hayaanka ah ee aan negaanshaha lahayn ee Ibraahim sheegay waa mid halkee u hayaan ah? Hayaanku ma mid ku jaan go’an baa teknoolajiga iyo wershedaynta? mise mid intaas ka sii qotodheer oo og cidhib-danbeedka nolosha adduunka iyo halka ay ku ogog leedahay. Ibraahim fikradiisu waa mid ka duulaya ereyga “horusocod” aanu isagu inoo sharxi karin meesha lagu socdo, wuxuu duudsi ka yeelay horusocodkii aynu ku tibanayney oo ahaa inaynu raacno nolosha xaqa ah, waxaanu inoo ammaanay horusocod kale oo salkiisu ruxmanayo, wedkiisuna yahay argagixiso samada lagaga soo tuuray. Noloshan macna beeshay ee uu Ibraahim ammaanayo ee uu horusocodka ku sheegayo miyeynu odhan karaa waxay ka sidataa kana qaayo weyn tahay nolosha aadamiga loo abuuray ee xaqa ah, salkeeduna yahay u eerashada dhanka Eebbe, ku mintidida xaqa iyo deedafaynta dulmiga.
Malaha Ibraahim wuxuu inagu doca-docaynayaa inaynu ka diimoonahay (moog nahay) wax ka dhigida nolosha adduunyo, oo wuxuu innagu dirqiyayaa inaynu u dhego nuglaano xeeldheerayaal (filasofiyiin) uu ku tilmaamay inay feker toosan yihiin, oo ay ka raalli noqon waayeen xaaladdaha laga raallida yahay. Nimankan fekerka toosan ee Ibraahim wax ka soo dheegtay, saw ma aha kuwa horumarkooda ku duudsiyey xaqii Alle iyo noloshii loo abuuray, bal eeg qoraalkii hore ee Ibraahim ka soo qoray Mr John “Horumarka aan Eebbe ku beeniyey aadamina kaga adkaaday baan ku dhaartay”. Saw taas ma aha fikradda Ibraahim uu Hadraawi ka doonayo inuu taageero, saw taas ma aha fikradda uu Ibraahim horumarka ku tilmaamayo, saw taas ma aha fikradda ciddii ka soo horjeesataa ay ku sifoobayso dibusocodnimada. Saw taas ma aha ta ciddii diidaa ay ku noqonayso wahaabinimada?
Ereyga “dibusocod” ma aha mid uu Ibraahim kala soo dhex baxay suugaanta Hadraawi ama buugga Hal Ka Haleel, balse waa mid uu hoosta kaga xariiqay qoraallo badan oo uu Internet-ka ku faafiyey. In badan ayaan akhristay qoraallo badan oo Ibraahim leeyahay oo uu Internet-ka geliyey, waxyaabaha uu inta badan ka duulayo waxa ka mid ah “ilbaxnimada“ oo uu ku tilmaamo in aanay Soomaalidu arag maqalna, ilbaxnimada uu sharxayaa waa mid ku liddi ah dhaqanka, hiddaha iyo diintaba. Waa mid aan waxba ka soo qaadin xeerarka nolosha ee ay soomaalidu degsatey, waana mid bodawnimo iyo dibudhac ku tilmaamaysa ku adkaanshaha nolosha asalka ah. Sidoo kale, qoraalladiisa waxa hormuud ka ah ereyga “horumar” oo uu innoogu tilmaamayo “horumarku” inuu la dhashay “ilbaxnimada” oo ay markasta ku ladhan tahay. Nolol kale oo adduunka ka jirtaana aanay jirin oo aan horumarkaa iyo ilbaxnimaddaa ka dab qaadanaynin, balse haddii ay jirtana ay noqonayso mid “damiinimo”, dibudhac, badownimo iyo dibusocodnimo ah .
Maansada ”Dabahuwan” maaha mid uu nuxurkeeda iyo dhaliisheeda kala soo dhex baxay buugga HAL KA HALEEL balse waa mid uu Ibraahim hore fikradeeda internetka ugu faafiyey. Sida uu maqaalkan ugu sharxay inay maansadu tahay mid dibusocod ah ayuu kii ka horreeyey ee” Dabahuwan, tixdii isbeddelka” ugu sheegay tixdaas mid dibusocod ah.
Waxaan soo qaadanayaa qayb ka mid ah hadalka qoraaga buuggu (Maxamed Baashe) ku sharxay tixda Dabahuwan ”Waxa uu iftiiminayaa sida uu dareenkiisu uga sal kacay ee uu Hadraawi uga wajiigay, una soo tufay wax badan oo loo aqoonsanaa wax wanaagsan iyo meelo badan oo laga bidhaansan jirey xal raadinta, isagoo ku duraya arragtida cilmaaniga ah nooc kastuu ahaadaba Dimuqraadiyad, Shuuciyad, Qawmiyad, Waddaniyad, Qabyaalad iwm ” Sharaxaadaas waxa uu qoraagu ku sheegay maansadu ka soo horjeedo gebi ahaanba nidaamyada iyo qawaaniinta gaarka ah ee adduunkan loo dejistay, sida Qabiil, Qaran, Dimuqraadiyad, Soo-shaliisam iyo Shuuuciyadba. Waxa kale oo qoraagu ku sharxay inay hiil cad ay u tahay dastuurka xaqa ah (kitaabka) iyo dadka mabda’iyan u taabacsan. Waxa kale oo uu qoraagu inoo cadeeyey in Hadraawi ka biyo diiday, necbaystayna waxyaabo badan oo wanaag iyo horumar loo yaqaaney, iyo meelo badan oo ilbaxnimada iyo cilmiga laga raadsan jirey.
Iyadoo ay sidaas tahay, ayuu haddana Ibraahim ku tilmaamay tixdan Dabahuwan tixda ugu cunsuriyadda badan suugaanta Hadraawi. Isagoo abwaanka ku tilmaamay inuu nacdal ololaysa guudka kaga tuuray reer galbeedka, isla markaana uu dadnimada ka saaray oo uu daayeer ku sheegay. Bal eeg beydadkan:
nin tiisu u diiran tahay
ma suu u dullaynayaa
ma shay laga daawadaa
garaadka nin daymo dhow
ma Daarwin siduu yidhaa
daayeer nin ka soo farcamay
ma suu u dareemayaa
miyaanay dastuur lahayn
kitaab iyo diin lahayn
miyaan laga sii danbayn
Inta aynaan u gudo gelin sharaxa beydadkan bal aynu sharax kooban ka bixino Daarwin, waxaan idiin soo qaadayaa qoraalkii Mr John ee Ibraahim laftiisu qoray” Charles Robert Darwin (1809-1882) wuxuu ahaa caalim ingiriis ah oo ku xeel dheer sayniska. Qoraalladiisa waxaa ka mid ah On The Origin of Species, ilaa maantana waxaa loo yaqaan asaasihii aragtida hiddeysiga iyo mudhbaxa noolaha. Aragtidaasi waxay saamayn asaasi ah ku leedahay hab-fekerka dadka reer galbeedka” . Innagaan waxba ka bedelin sharaxaadda uu Ibraahim saaray Charles Darwin oo ahaa ninkii lahaa fikradda odhanaysa; dadku wuxuu ka soo tafiirmay daayeerka, bal aynu si guud u dul mar-no macnaha beydadka Dabahuwan ee uu Ibraahim dhaliilay.
Ibraahim isagoon nuxurka iyo macnaha beydadka isku-tiirsan u eegin ayuu la boodey hal beyd oo keliya oo uu ka dareemay in dad lagu tilmaamay inay ”daayeer” ka yimaadeen. Hadraawi wuxuu tilmaamay in ciddi aaminsan tahay in daayeerka laga soo farcamay, waxa kale oo uu sheegay cidda fikraddaas aamisan (Darwin). Hadraawi isagoo aragtidaa Daarwin ka soo horjeeda ayuu yidhi ”nin tiisu u diiran tahay” nin arrintiisu la fiican tahay, ”ma suu u duullaynayaa” ma siduu nolosha dhabta ah iyo isirka dadnimada u dulleynayaa? ”ma shay laga daawadaa, garaadka nin daymo dhow” Noloshu ma waxay tahay mid lagaga daydo garaadka qof meel dhow wax ka arka, mise intaas way ka sii duluc iyo macno fog tahay? ”Ma Daarwin siduu yidhaa” dadnimadu ma waxay tahay sida uu Darwin tilmaamay. ”daayeer nin ka soo farcamay, ma suu u dareemayaa” Bani aadamnimadu ma sida cidda aamisan inay daayeer ka soo farcantay u dareensan tahay baa mise intaas way ka sii xeel dheer tahay? Abwaanku su’aashaas ayuu inna weydiinaya, Isagoo sii wata weydiintaas waxa uu yidhi: miyaanay dastuur lahayn? kitaab iyo diin lahayn? miyaan laga sii danbayn? Waxa uu inna weydiinayaa, miyaanay noloshu dastuur (kitaab) iyo caqiido (diin) lahayn, miyaanayse nolosha iyo dadnimadu ahayn mid laga danbeeyo, oo aan Ilaahay marajaha u hayn, lana xisaab-tami doonin?
Daayeerka waxaa ka yimi
waxaan dad habboon ahayn
innagu dir kalaynu nahay
duudkii Nebigaynu nahay
Seefla-boodnimadu ma fiicna, waxa habboon inaad suugaanta dhuuxdid macnaha ay leedahay ka hor inta aadan dhaliilin ama ammaanin. Ibraahim waxa uu ku dooday in xataa haddii fikradda ” daayeerku” sax tahay, inaan Hadraawi iyo cid kale toonna xaq u lahayn inay qof bani aadam ah daayeer iyo doofaar ku sheegto. Waxa kale Ibraahim tibaaxay in ay islaamnimada iyo xeerka wada-noolaanta ka baxsan tahay in qofka dadnimada laga saaro marka la dhaliilayo ama lagu mucaaraddadayo. Miyeynaan xaq u lahayn inaynu innagu fikradda khaldan ee Darwin diidno haddii aynu bani aadam nahay oo aynaan odhan karin, annagu (bani aadam ahaan) daayeer kamaanu iman ee idinka (Darwin iyo kooxdiisa) ayaa daayeerka ka yimi. Marka uu abwaanku leeyahay ”Daayeerka waxaa ka yimi, waxaan dad habboon ahayn” waxa kuu uga jeedaa Darwin iyo kuwa ay isku fikradda yihiin ayaa daayeerka ka yimi, dadka kale oo dhammi waxay ka soo farcameen kana soo tafiirmeen Nebi Aadam (CS). Waa halkaa meesha ismaan-dhaafku ka jiro ee uu Ibraahim sida seefla-boodnimada ah u sharxay.
doofaarrada aan gudnayn
diinlaawaha gaalku dhalay
Labadan beyd ee Ibraahim ka diday, ee uu nacdasha ololaysa ku tilmaamay waxa uu leeyahay yaan la maagin nimankan reer galbeedka oo doofaaro lagu sheegin, hase ahaatee Ibraahim wuxuu moog yahay in doofaarku yahay xayawaan Ilaahay abuurtay oo aanay wax dhaliil ah mudnayn. Islaam ahaan waxa la innaga xaaraam-timeeyey doofaarka cunnidiisa iyo ka ganacsigiisa balse xawayaan ahaan wax dhibaato ah oo uu leeyahay ma jirto, xitaa dila laynama farin, cadiba laynama odhan, cayna ma geyo. Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa ”doofaarka ficil la’aan ayaa lagu cadaabaa” arrintaas saw wax kama jiraan oo lama ogaanin in doofaarku qashinka iyo saxarada cuno. Caadiyanna soomaalidu qofka waxa ay ku masaashaa noolaha kale marka ay tilmaamayaan martabadda uu nolosha ka taagan yahay, tusaale ahaan gabadha quruxda badan waxa lagu masaalaa hal geel ah ama faras geenyo ah (faraska dheddig), ninka geesiga ah waxa lagu tilmaamaa libaax, halka ninka waayeelka ahna waxa lagu tilmaamo awr hayin ah oo biyo ma daadshaan ah. nimankaa Hadraawi maagayna inay diinlaawe yihiin waxaan filayaa inaan mad madow ku jirin. Ibraahim hadalkiisu saw ma aha yaan nimankan reer galbeed doofaar lagu sheegin? oo caqiidiyan doofaarka iyo ninka diinlaawaha ah kee baa qadarin mudan? Doofaarku miyuu ilaahii abuurtay caasiyey, miyuu adduunyada dhib geliyey? miyuu diinta xaqa ah dhibay? Horta maxay ku kala duwan yihiin qofka libaax lagu tilmaamo iyo kan daayeer, ama doofaar lagu tilmaamo? saw intuba xayawaan ma aha? Farqiga u dhexeeyaanna saw ma aha halka ay nolosha ka kala taagan yihiin, in midkood karti iyo garasho fiican leeyahay halka ka kale sabar-xumo iyo nacasnimo uu ku nool yahay.
3) Dibusocodnimada maansada Hadraawi
Haddaba, Ibraahim waxa uu ku andacooday in Hadraawi suugaantiisu weligeedba dibusocod ahayd, maantana ay ugu sii darran tahay. Waxa maansada Hadraawi dibusocodnimadaa ku galabsatay inuu ku ammaano, kuna dhiiri geliyo dhaqanka iyo diinta. Waxa Ibraahim ka maandiiday tixihii hore Hadraawi ee uu caqiiqadada kaga hadlayey, sida “Ergadii furqaan” iyo “Daryeel” waxa kale oo Ibraahim ku qanci waayey kuwii dhaqanka ka hadlayey sida; “heego muuqdheer” Baaq, iyo Gabadh Madow. Isagoo markii horeba Ibraahim la yaabanaa tixahaa yaabka badan, ayuu haddana Hadraawi tiriyey tixo kale oo kuwaas ka sii yaab badan. Maansooyinkan danbe ee Hadraawi waa kuwo dadka dareenkooda aad u soo jiita, kana hadlaya nolosha dhabta ah. Waa tixo farshaxnimadooda iyo waayo-aragnimada lagu tiriyey ay aad u sarreyso, oo qofka aan caqiidada wanaagsan lahayn cabsi iyo argagax ku ridaysa, dareen firgo-nax ahna ku reebaysa. Maansooyinkan danbe waxa ugu horreysa tixda Dabahuwan, Afku-siran, Hal Iyo Halkiis iyo Badbaado. Haddaba, miyeynu maansooyinkaas sirta nolosha ka hadlaya ku tilmaami karnaa qaar dibusocod ah? Haddiise ay dibucod yihiin aragtidee ayey dibusocodnimada ku noqdeen ma ta soomaalida, ma ta Ibraahim mise ta Darwin ee ku ogog leh, dadku daayeer buu ka yimi?
Dadku daayeer buu ka yimi? (Charles Darwin)
Waa arrin iska caadi ah ama aan wax anfariir ah ku gelinayn haddii aad maqashid dad leh ama aaminsan in asalka aadamigu daayeer ka yimi, waana aragtida saynis-yahan Charles Darwin uu adduunka ku faafiyey. Aragtidaas oo la soo xamaashay iyadoon wax su’aal ahba loo celin saynis-yahanka, miyey weydiiyeen halka daayeerka asalkiisu ka yimi? miyuuse u sheegay isagu? Maya, haddaba soomaalidu waxay aaminsan tahay in daayeerka laftiisu ahaa qowm ilaahay caasiyey oo dembi ka galay culimadii xaqa baresey (diinta u dhigayey). waxay yidhaahdaan daayeerku wuxuu ahaa dad meel degenaa oo ilaahay sidan ku ciqaabay, maskaxiyan tan ayaa uga dhaw ta Darwin in daayeerku ahaa qowm la rogey oo Ilaahay sawaabay, ka dib markii dulmigoodii iyo denbigoodii uu batay? Saw kama war haysaan qowmu Luud, qowmkii xalaashaday makhnuudnimada, saw kama war haysaan, Samuud iyo Caad? ummadihii xooga sheegay ee Ilaahay halligay? aragtidaas iyo falsafaddaas xeesha dheer ayey soomaalidu ka taagan tahay daayeerka. Haddii la barbar dhigo tan Darwin sida gudcurka iyo cadceeda ayey isku yihiin.
Ibraahim waxa uu aaminsan yahay in dhaqanka iyo hiddaha soomaaliyeed uu yahay mid abaadday oo beri hore dhintay, waxa uu Hadraawi ku xukumay inuu ummadda ku hayo dhaqan geel-dhaqasho, fardo fuulnimo, oo kala sarraynta qoyska iyo iskaga dayasho wax aan nafci lahayn ku dhisan. Haddaba marka aad dhaqan dhaliilaysid ama aad ammaanaysid waa inaad tusaale haysataa aad u soo qaadanaysid kan kale ee aad ku yasaysid. Tusaale ahaan, marka aad dhaqanka soomaalida haseysid waa inaad haysaa dhaqan kale oo aad ugu bedelaysid ama ku sargoynaysid hasidaada.
Dhaqanka iyo xishoodka ayaa bulshada hoggaamiya, iyagaana ka dhiga ama bulsho hadba dhaqan-degmata ama bulsho jiritaankeedu sugan yahay oo leh xadhko aanay ka dul boodi karin. Xadhkahaasi ha noqdaan dhaqan-xishood ku dhisan ama mid diin ku dhisan, haddii ay bulshadu weydo xadhkahaas saw xoolaha hoos u dhaafi mayso. Saw markaa bulshada jaahwareer caqiido iyo mid dhaqanba ku dhici maayo. Soddohdu inaanay guriga gabadheeda gelin inta ninkeedu joogo waxay ahayd anshax iyo asluub wanaagsan oo ay ummadda soomaaliyeed lahayd, wax dhib ah oo ay lahaydna ma jirin. Inay wax la cunto oo dheriga faraha isku goostaan waxay ahayd arrin ceeb ah oo sabab u noqon karaysey in gabadheedaba loogu soo furo. In arrintaasi noqoto maanta mid lagu faanno ama horumar lagu tilmaamo waxay ina tusaysaa madhnaan xagga dhaqanka ah oo soo food-saartay ummadda iyo aragti aynaan asalkeeda lahayn. Haddii ay ummaddu dhaqankeeda iyo jiritaankeeda ku dhaadan weydo, kuna dheganaan weydo saw qowmu Luud ka dhex bixi maayo?
Ibraahim waxa uu maagay dhaqanka soomaalida oo uu sheegay inuu yahay mid dhintay, balse miyuu inoo sheegay mid nool oo aynu ku bedelan karno. Ibraahim ma waxa iskaga khaldan dhaqanka iyo dhaqaalaha? Ma waxa iskaga gedmaday horumarka iyo hiddaha? Cidda uu horumarka ka bidayaa miyaanay ahayn kuwa ku faana dhaqan iyo diin la’aanta. Akhriso dhaarta Mr John ee Ibraahim soo turjumay ” Horumarka aan Eebbe ku beeniyey aadamina kaga adkaaday baan ku dhaartay” Dhaqanka iyo horumarkoodu saw gurigaaga soo dumi oo kayga ila dhis maaha? saw anigu aan noolaado adiguna dhimo maaha? saw dhulkaaga aan sun ku shubo kaygana aan hub uga dhigo maaha? saw dhirtaada aan xagaafo aniguna aad sariiro iyo miisaan ka dhigto maaha? saw aan macdantaada gurto oo aan kugu dilo ka samaysto maaha?
Haddii qof arrin aaminsan yahay uu qof kale aragtidiisa ka dhiibto ama wax ka soo qoro miyaa lagu shaanbadayn karaa inuu arrinta la aaminsan yahay, tusaale ahaan haddii weriye soo waraysto Bin Ladin miyaa lagu xukumayaa inuu weriyahaasi Al-Qaacida yahay? Haddii uu qareen u doodo Saddaam Xusayn miyaa la odhan karaa wuxuu taabacsan yahay Saddaam? Haddaba, haddii ay jawaabtu tahay ”HAA”, miyeynaan Ibraahim laftiisa ku xukumi karin inuu fikradda John la aaminsan yahay! (John waa ninkii lahaa, Awooddayda aan awood ka weyni jirin baan ku dhaartay! Diintayda diin la'aanta ah baan ku dhaartay! Dadnimadayda taada ka sarraysa ayaan ku dhaartay! Midabkayga kaaga ka cad baan ku dhaartay! Horumarka aan Eebbe ku beeniyey aadamina kaga adkaaday baan ku dhaartay). Ibraahim waxa uu guudka iska saaray Hadraawi iyo Maxamed Baashe oo uu sheegay inay wada aaminsan yihiin aragtida wahaabinimada. Waxa kale oo uu sheegay in Idaajaa la waalan yahay jacaylka iyo elehnimada Sayid Maxamed Cabdile Xasan.
Haddaba Ibraahim saddexdaa qayboodba Maxamed Baashe wuu ku gacan saydhay, sidoo kalena wuxuu Maxamed Baashe & Hadraawiba ka soo qaaday inay aragti Wahaabinimo u garbo duuban yihiin, mar haddii aysan raacsanayn aragtida cilmaaniga ah sida Dimuqraadiyadda iyo Shuuciyadda iwm. Ibraahim waxa uu innoogu baanay inay wahaabinimadaasi tahay aragti qofka ka dhigaysa argagax-ku-noole oo bandow ka saaraysa fekerka maskaxeed iyo filickii uu samayn lahaaba. Haddaba, haddii aan akhriyey fikradaha Ibraahim iyo Maxamed Baashe, iyo weliba ta Hadraawi ee tixda Dabahuwan, waxa iiga soo dhex baxay farqi weyn oo dhinaca caqiidada iyo dhaqanka ah oo u dhexeeya labada dhinac (Maxamed Baashe & iyo Hadraawi oo dhinac ah iyo Ibraahim oo dhanka kale ah).
Ibraahim waxa uu ku dooddayaa oo badownimo iyo horumar la’aan ka soo qaaday qofka Alle maciinsada, una hogaansamo, waxaanu ku tilmaamay qof aan waxba qabsan karin oo itaal gab ahi uu dhanka Ilaahay u cararo marka uu ku guuldaraysto inuu noloshiisa horumar gaadhsiin kari waayey. Waxa kale oo uu raaciyey haddii aad Ilaahay tuugtid oo aad reer galbeedka ka soo horjeesatid inaad ku sifoobayso argagixiso cabsi gelinaya habsami u socodka nolosha horumarka ah ee adduunkan. Nuxurka iyo dulucda qoraalka Ibraahim Yuusuf Axmed sidaas ayuu ku bisho shubmayaa.
Fiiro-gaar ah: Haddii aan duro ama aan wax ka sheego aragti qof aaminsan yahay, looma qaadan karo loomana aanayn karo inaan maagayo ama meel ka dhac aan u geysanayo qofkaas. Tusaale ahaan haddii aan wax ka taab taabtay aragtida Ibraahim oo aan qoraalkan kaga hadlay, yaan loo fahmin inaan Ibraahim sidiisa u maagayo, waayo waxa laga yaabaa inuu fikradiisa bedelo ama sida uu u dhigay aanu u aaminsanayn.
Alle ayaa mahad leh
Hoyga dhaqanka, afka iyo suugaanta
Faafin: SomaliTalk | July 24, 2004
HA U DAYM ALA"AAN IN AAD AKHRIDID: SIIRO | SAXAABADA | SALAT | ZAKAT | SHIFO |